Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia no mitana ny laharana pasipaoro vaovao manerantany
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Etazonia no mitana ny laharana pasipaoro vaovao manerantany.
Nahazo isa tsara tamin'ny Indexes Investment, Quality of Life ary Enhanced Mobility Index, Etazonia dia eo an-tampon'ny latabatra, saingy tsy naharesy na Index iray aza.
Ny Etazonia Etazonia dia laharana faha-10 ao amin'ny Mobility Index, faha-4 amin'ny Index Investment, ary faha-23 ao amin'ny Quality of Life Index.
Raha misafidy ny Enhanced Mobility sy ny Index des Investment, dia samy ho tampon'izany i Singapaoro.
Ny firenena voalohany ao amin'ny Index of Quality of Life dia Soeda.
Ny filaharana pasipaoro taloha dia tapaka. Mazava ho azy fa zava-dehibe ny fahazoana miditra amin'ny firenena, tsy misy visa, saingy tsy tokony hanana anjara toerana lehibe ve ny kalitaon'ny fiainana, ny asa, ny zon'olombelona ary ny singa maro hafa rehefa mitanisa ireo pasipaoro tsara indrindra eran'izao tontolo izao isika?
Ny minisitry ny raharaham-bahiny Riad Maliki avy amin'ny fanjakan'ny Palestine sy ny raharaham-bahiny Mark Brantley avy any St Kitts sy Nevis dia nanao sonia fifanarahana famotsoran-keloka tsy misy visa tamin'ny faha-60 taonan'ny Hetsika tsy mifanaraka amin'ny lao any Serbia tamin'ity herinandro ity.
Ireo manam-pahaizana momba ny dia dia nanombana loharanom-baovao an'arivony maro, nanangona ny angona izay manan-danja, ao anatin'izany ny fidirana maimaim-poana amin'ny visa, fa kosa miampy ny fivezivezena, ny fampiasam-bola ary ny kalitaon'ny fiainana natolotry ny toerana tsirairay ho lasa index vaovao mifantoka amin'ny fiainana izay manampy ireo efa lany andro filaharana taloha. Ny zon'ny lalana tsy misy visa dia ampahany amin'ny sandan'ny toeran'izay aleha ihany, ity Passport Index ity dia mampifanaraka ny angon-drakitra ary mametraka ny firenena amin'ny fomba feno kokoa.
Midira an-tsehatra mpandalina isa manana traikefa betsaka amin'ny fikambanana iraisam-pirenena, manadihady tetik'asa tahirin-kevitra lehibe ho an'ny UNESCO, OECD, ary ny Banky Iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana, ny Global Passport Index dia manolotra fomba vaovao handrefesana ny fahasarotan'ny firenena tsirairay amin'ny famindrana toerana, fampiasam-bola, na tanjona maha-olom-pirenena roa amin'ny alàlan'ny index telo tsy miankina: Enhanced Mobility Index, Index Investment, ary Quality of Life Index.
Ny index tsirairay dia ahafahan'ny mpampiasa manivana ny valiny ho an'ny filaharam-pirenena tsirairay, amin'ny fampiasana tondro 11 samihafa naterak'ireo loharano malaza toa ny World Economic Forum, Gallup, ary ny Ivotoerana momba ny lalàna sy ny tontolo iainana Yale.
Ny pasipaoro 10 ambony laharana ao amin'ny Global Passport Index dia misy:
Ny Etazonia Etazonia dia laharana faha-10 ao amin'ny Mobility Index, faha-4 amin'ny Index Investment, ary faha-23 ao amin'ny Quality of Life Index. Ny index tsirairay dia milanja 50% (fivezivezena) 25% (Fampiasam-bola) 25% (Kalitaon'ny fiainana) ary miaraka amin'ny totalin'ny 96,4, ny Global Passport dia nametraka an'i Etazonia tamin'ny toeran'ny tsatokazo.